Cuntooyinka Soodhiyamka hooseeya - Cuntada Kelyaha ayaa laguugu keenayaa albaabkaaga
Cunnooyinka Sodium ee Hooseeya - Gaarsiinta Cunnada Kelyaha ee Albaabkaaga
Qorshooyinka cuntada ee kelyaha, oo sidoo kale loo yaqaan kalyaha ama kalyaha sifaynta, waxay ka kooban yihiin cuntada soodhiyamka ah iyo borotiinka kaa caawinaya inaad la socoto sodium maalin kasta si looga caawiyo isu dheelitirka socodka dhiigga, shaqada neerfaha, iyo nidaaminta dheecaannada jirka.
Sida laga soo xigtay Daryeelka Kilyaha Davita, marka shaqsiyaadka la nool cudurka kalyaha ay isticmaalaan sodium aad u badan, ayaga kelyaha ma awoodaan inay baabi'iyaan macdanta xad dhaafka ah iyo dareeraha jirka. Ugu dambeyntiina, walxahaani way soo baxaan oo waxay keenaan fuuqbax, iyagoo culeys dheeri ah saaraya wadnaha waxayna keenaan cadaadis dhiig oo sarreeya. Markay taasi dhacdo, shakhsiyaadka waxaa laga yaabaa inay la kulmaan barar, neefta oo ku qabata, iyo ugu dambeyn kelyaha oo shaqeynaya. Sidaa darteed, furaha dib u dhigista dhaawaca kelyaha oo dheeri ah wuxuu si firfircoon u maareeyaa qadarka sodium ee jirkaaga galaya.
Waayeelka la nool cudurka kelyaha ayaa hadda ku raaxeysan kara Cuntada Lugaha'' gaarsiinta cuntada sodium ka yar barnaamijka taas oo kaliya dhadhamin weyn, laakiin sidoo kale waxay siisaa qiimo nafaqo oo wanaagsan nolosha madax-bannaan.
Saxiix Gaarsiinta Cunnaynta Kelyaha Maanta!
Ku saabsan Our Qorshooyinka Cunnada Kelyaha
Cuntada Lugaha hadda waxay bixisaa kala duwanaansho ku saabsan qorshayaasheena cuntada ee hadda si aan u qaabeyno baahiyaha cuntada sodium ee hooseeya. Markaan si dhow u wada shaqeyno, kuuggayaga khibrada leh iyo nafaqada diwaangashan ayaa abuuri doona qorshaha cuntada cuntada kelyaha kaas oo la jaan qaadaya baahiyahaaga caafimaad, dhadhamiya macaan, waxayna kaa caawinayaan inaad xaddido isticmaalka soodhiyamka iyada oo loo marayo xakameynta qaybta iyo nafaqada isku dheelitiran.
Sida Loo Bilaabo Qaadashada Cuntada Lugaha'' Cunnooyinka Cunnada Kelyaha
Cuntada Wheels waxaa ka go'an in la gaarsiiyo dadka waayeelka ah ama shakhsiyaadka naafada ah ee ku nool agagaaraha Metro-ka cunno cusub, dhadhan fiican leh, iyo nafaqo leh! Si aad wax badan uga barato kuweenna qorshooyinka cuntada kelyaha, naga soo wac (612) 623-3363 ama noo soo dir [email protected] su'aalo ku saabsan sida gaarsiinta cuntada sodium ka yar barnaamijku wuu shaqeeyaa! Si aad maanta isuqorto, booqo websaydhkeena iyo buuxi foomkeena internetka.
Fikradaha Cuntada Sodium ee Yar
Waxay kuxirantahay heerka cudurka kalyahaaga, kanaga qorshaha cuntada soodhiyamku ku yar yahay waxay xaddidi kartaa isticmaalka cabitaannada ay ku jiraan fiitamiinnada iyo macdanaha qaarkood.
Sida laga soo xigtay Sanduuqa Kelyaha Mareykanka, dhakhtar ayaa kugula talin kara inaad ka yareysid macdanta potassium iyo fosfooraska cuntadaada. Si lagaaga caawiyo inaad iska ilaaliso cunista inbadan oo kamid ah noocyada cuntooyinkaan, Sanduuqa Kelyaha Mareykanka wuxuu bixiyaa talooyinka soosocda:
Fikradaha lagu beddelayo Botaasiyamka:
Mooska, isbinaajka, ama digirta ugu beddel tufaax, strawberries, ama canab
Fikradaha Beddelka fosfooraska:
Ku beddel dalagyada buunshaha, lowska, iyo iniinaha gabbaldayaha si aad u hesho badarka galleyda ama bariiska
Mid ka mid ah welwelka ugu weyn ee waayeelka la nool cudurka kelyaha ayaa ah inaan la helin nafaqooyinka muhiimka ah ee jirku u baahan yahay inuu ku shaqeeyo heerkiisa ugu wanaagsan. Iyadoo Cuntada Lugaha'' qorshooyinka cuntada kelyaha, waad ku nasan kartaa kalsoonida in cunnooyinka cusub iyo maaddooyinka saxda ah ee lagu geeyo albaabkaaga loogu talagalay inay kaa dhigaan kuwo caafimaad qaba oo dareema sida ugu fiican. Nala soo xiriir si aad wax badan uga barato!